शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण पाइने पक्का, कुन विषय पढ्नेले कति पाउने ? – Everest Dainik – News from Nepal
शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण पाइने पक्का, कुन विषय पढ्नेले कति पाउने ?
काठमाडौं, असोज १५ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा घोषणा गरेजस्तै अब स्नातक र सोभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसकै आधारमा निब्र्याजी र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन ऋण वितरण निर्देशिका, २०७५ को मस्यौदा तयार पारिएपछि यो पक्कापक्की नै भएको हो । उक्त निर्देशिकामा आर्थिक रुपले विपन्न तथा जेहनदार विद्यार्थीको पहिचान गरी ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिँदै सोही निर्देशिकाको आधारमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए । निर्देशिकामा २३ वर्ष नाघेका विद्यार्थीलाई स्नातक तह अध्ययन गर्न ऋण दिने अवसर दिइने छैन ।
अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई न्यूनतम २ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा एमबीबीएस र एमडी अध्ययन गर्न ३५ लाख, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, वन, पशु चिकित्सा, आयुर्वेदिक र चिकित्सा विषयका स्नातक र स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्न १५ लाख, फार्मेसी र नर्सिङ र फुड टेक्नोलोजी विषय अध्ययन गर्न १२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
निर्देशिकामा अध्ययनका लागि कर्जाको सीमा कायम गर्दा विश्वविद्यालय वा कलेजमा लाग्ने खर्चलाई आधार मानिएको छ । माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षाको मार्कसिट तथा सर्टिफिकेटहरु, पासपोर्ट भए सो समेत धितो राखिने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक कर्जाअन्तर्गत अध्ययन गर्न छनोट भएपश्चात धितोमा राखिएका सर्टिफिकेटहरु ऋण चुक्ता नभएसम्म बन्धक राखी प्रतिलिपि दिन समेत रोक्का गरिनेछ ।
निर्देशिकामा कर्जा प्रवाह व्यवस्थापन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ । अध्ययन गर्न छनोट भएका विद्यार्थीले १० वर्षभित्र ऋण तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
ट्याग्स: Rin, ऋण पाइने पक्का, शैक्षिक प्रमाणपत्र